Mfe ịchịkwa gị Mac si gam akporo na Best 6 Mac Ime égwu
Ịnweta na-ebufe data n'etiti ekwentị gị na Mac abụwo mgbe nile na-eweta nsogbu, nri? Ugbu a, ị pụrụ ịnụ ụtọ elele ịbụ onye Android ọrụ. Ị nwere ike ime akara gị Mac na aka gị ẹkenịmde ngwaọrụ mekọrịta ọdịnaya seamlessly. Ị ga n'ime ime obodo Mac si gị gam akporo ngwaọrụ iji otu ọdịnaya na ma gị ekwentị na kọmputa. Ị pụrụ ịnụ ụtọ na ịnweta data na kọmputa gị na-na-na-aga mfe na-akpaghị aka. A ga-enwe dịghị mkpa ka ozi kpọtara data aka. Oru oma ma ala njikọ n'etiti gị gam akporo ngwaọrụ na kọmputa ga-eme ka ndụ gị mfe. Ị ga-bụghị naanị ịnweta faịlụ gị na ngwa n'ebe ọ bụla kamakwa ịchịkwa na inyocha ha. Na na kwuru, isiokwu a na-edekọ top 7 Android ngwa ọdịnala na ike ime Mac.
1. Team onyenlereanya Free Dịgasị na ngwaọrụ 4.5 Android 2.1 na elu
2. Splashtop 2 Ime Desktọpụ Free 18M 4.6 Android 2.2 na elu
3. VNC onyenlereanya Free 4.6M 4.4 Android 2.1 na elu
4. Mac Ime Free 4.1M 4.7 Android 2.3 ma ọ bụ mgbe e mesịrị
5. Chrome Ime Desktọpụ Free 2.2M 4.4 Android 4.0 ma ọ bụ mgbe e mesịrị
6.-awụlikwa elu Desktọpụ (Rdp & VNC) Ugwo 5.7M 4.7 Android 2.3 ma ọ bụ mgbe e mesịrị
1. Team onyenlereanya
Team onyenlereanya bụ a free ngwa na-eji maka ime ịchịkwa gị Mac na nwere ike mfe arụnyere. N'adịghị ka ndị ọzọ ngwa nke na-mgbe na-agba ọsọ, Team onyenlereanya kwesịrị-oru aka. Otú ọ dị, i nwere ike inweta otu nhọrọ na-edebe ya na-agba ọsọ ma na-etinye a omenala paswọọdụ tupu ịnweta gị Mac. Strong izo ya ezo, zuru keyboard, na elu nche ogbugba ndu bụ ole na ole n'ime ya Isi. Ọzọkwa, ọ na-enye ohere na-enyefe faịlụ na ma ntụziaka na iji ihe nchọgharị weebụ maka ime ohere gị Mac. Ọ bụ ezie na o nwere otu njuaka atụmatụ, ọ bụ adịghị mma nhọrọ ma ọ bụrụ na i bu n'obi na-agba ọsọ arọ ngwa remotely.
Download Team onyenlereanya si Google Play >>
2. Splashtop 2 Ime Desktọpụ
Splashtop bụ otu n'ime ihe ndị kasị elu, kasị na keukwu ime desktọọpụ ngwa, nke-enye gị na-uru nke elu na-agba na àgwà. Ị pụrụ ịnụ ụtọ 1080p videos, a makwaara dị ka Full HD. Ọ bụghị nanị na-arụ ọrụ na gị Mac (OS X 10.6+), kamakwa na Windows (8, 7, Vista, na XP) na Linux. All omume na-akwado site na Splashtop na-arụnyere na kọmputa gị. Ị nwere ike mfe ịkwaga gburugburu gị na kọmputa ruru oru oma nkọwa nke Multitouch mmegharị nke a App. Ọ na-enye ohere 5 kọmputa site na otu Splashtop akaụntụ n'elu mpaghara na netwọk. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji nweta site internet, i kwesịrị denye aha na n'ebe ọ bụla Access Pack site Na-App Ịzụ.
Download Splashtop 2 Ime Desktọpụ si Google Play >>
3. VNC onyenlereanya
VNC onyenlereanya bụ onyeōzi desktọọpụ Ịchịkwa protocol usoro. Ọ bụ ngwaahịa site echepụta nke ime ohere technology. Ọ bụ nnọọ ike iji melite na bụ n'elu ikpo okwu dabere. Otú ọ dị, ọ na-eme nwere ụfọdụ n'ezie ezi atụmatụ dị ka scrolling na-adọkpụpụta mmegharị ahụ, tuo ka ibubaa, akpaka arụmọrụ njikarịcha ma ọ na-adabere na gị internet ọsọ. E nweghịkwa ọ bụla ọnụ ọgụgụ dị nta nke kọmputa ị nwere ike ịnweta site na VNC onyenlereanya ma ọ bụ oge oge nke gị ohere. Ọ gụnyekwara izo ya ezo na Nyocha maka a ala njikọ gị na kọmputa. Otú ọ dị, o nwere ụfọdụ ọghọm dị ka nche na arụmọrụ mbipụta. Ọzọkwa, ọ na-kwesịrị ọzọ nhazi karịa ndị ọzọ na bụ bit mgbagwoju.
Download VNC Viewe si Google Play >>
4. Mac Ime
Ọ bụrụ na ndị android na ngwaọrụ ma MAC OSX nwere otu WiFi netwọk na ị chọrọ iji gị android ngwaọrụ dị ka ime media njikwa, mgbe ahụ, MAC ime bụ nhọrọ ziri ezi. A na ngwa bụ dakọtara na a ọnụ ọgụgụ nke media Player, gụnyere ma na ọnweghị oke:
I nwere ike dị-na na na zuru ike na gị n'ihe ndina mgbe na-ekiri a nkiri na gị Mac na mmega olu, nchapụta na ndị ọzọ bụ isi playback njikwa eji gị android ngwaọrụ dị ka a n'ime obodo. I nwekwara ike ịgbanwee anya gị MAC iji MAC n'ime ime obodo. Ọ na-arụ ọrụ nwere ihu ọma dị ka a media njikwa na-akwado ndị e depụtara omume n'elu na ya mere eji na-ime akara dum Mac. Ọ dị mfe ma na-ejedebeghị na ojiji. The size nke Mac Ime bụ 4.1M. Ọ na-achọ Android version ma gụọ 2.3 na elu na nwere fim akara nke 4.0 na Google play.
Download Mac Ime si Google Play >>
5. Chrome Ime Desktọpụ
Ọ bụrụ na ị na-eji Google Chrome nchọgharị weebụ, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike mfe enwe ime ohere gị Mac ma ọ bụ PC site na wụnye ndọtị maara dị ka Chrome Ime desktọọpụ gị Chrome nchọgharị na weebụ. Ị chọrọ nwụnye a ndọtị na-enye Nyocha site onye PIN. Ị ga-mkpa ka a ite n'ime gị Google akaụntụ. Na-eji otu Google nzere ọzọ Chrome nchọgharị na ị ga-ahụ ndị ọzọ PC aha na onye ị chọrọ na-amalite ime nnọkọ. Ọ dị nnọọ mfe melite na-eji. Otú ọ dị, ọ na-adịghị ekwe ka faịlụ nkekọrịta na ndị ọzọ na elu nhọrọ na ndị ọzọ ime ohere ngwa ọdịnala na-enye. Ọ bụ dakọtara na ihe ọ bụla sistemụ nke na-eji Google Chrome. The size nke Chrome Ime Desktọpụ bụ 2.1M. Ọ na-achọ Android version 4.0 na elu na nwere fim akara nke 4.4 na Google play.
Download Chrome Remore Desktọpụ si Google Play >>
6.-awụlikwa elu Desktọpụ (Rdp & VNC)
Na-awụlikwa elu Desktọpụ, i nwere ike ịhapụ gị na kọmputa ma ọ bụ na laptọọpụ n'azụ na-enwe ime ohere ọ 24/7 n'ebe ọ bụla. Ọ bụ otu n'ime ndị dị ike ime ohere ngwa, nke-ekwe ka ị nweta na na-ejikwa gị PC gị android ngwaọrụ. Nche, pụrụ ịdabere, mfe, streamlined ọrụ interface, ndakọrịta na Rdp na VNC, otutu Monitors, na izo ya ezo na ya Isi. Na PC gị na ọ bụ Mac, na-aga http://jumpdesktop.com/go na-eso mfe nzọụkwụ ka malitere n'oge na-adịghị. Ọ nwere yiri atụmatụ dị ka ọtụtụ ndị ngwa dị ka tuo na-mbugharị, òké Ịdọrọ, na abụọ mkpịsị aka scrolling. Ọ na-ahapụ gị ịchịkwa kọmputa gị mfe na seamlessly. Ọ na-akwado zuru mpụga keyboard na òké, na-enye gị a PC-dị ka obi na-adị. Ozugbo zụta, i nwere ike iji ya na niile Android ngwaọrụ. Ịmafe ngwa agaghị ịkpata njikọ ọnwụ.
Download-awụlikwa elu Desktọpụ (Rdp & VNC)
Top 8 Kpọtụrụ Manager maka Android
> Resource> Mac> Best 6 Mac Ime égwu Easily akara gị Mac si gam akporo